कक्षा १२ को परीक्षाको पर्खाइमा रहेका विद्यार्थीहरुका लागि बल्ल आयो निकै खुसीको खबर ! – AB Sansar
कक्षा १२ को परीक्षाको पर्खाइमा रहेका विद्यार्थीहरुका लागि बल्ल आयो निकै खुसीको खबर !
October 5, 2020 adminLeaveaComment on कक्षा १२ को परीक्षाको पर्खाइमा रहेका विद्यार्थीहरुका लागि बल्ल आयो निकै खुसीको खबर !
कक्षा १२ को परीक्षाको पर्खाइमा रहेका विद्यार्थीहरुका लागि बल्ल आयो निकै खुसीको खबर ! शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कक्षा १२ को परीक्षा लिखितरुपमै लिने गरी गृहकार्य भइरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा भएकाले लिखित लिनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
ह’राएको २ महिना पछि शारदा र ८ वर्षका छोरा बारे आयो स’नस’नीपुर्ण खबर, उनी जि’वित छन् भन्ने आ’शा र’हेन
चाडपर्व नजिकिदै गर्दा ओलि सरकारले बनायो यस्ता कडा मापदण्ड, पालना नगर्नेलाइ कडा सजाय हुने !